Fitaovana fitrandrahana fasika sy fitrandrahana vatokely - Dredge Ellicott
Rehefa eo ambanin'ny latabatra anaty rano na ao anaty dobo fihazonana ireo fitaovana toy ny fasika sy vatokely, mineraly na rambony, ny fitrandrahana miaraka amin'ny dredge suction cutter no fomba mahomby indrindra ahazoana sy hitaterana azy ireo amin'ny fitaovana fanodinanao.
Ny rafitra dredge mavesatra andraikitra an'i Ellicott dia natao hamokarana maharitra sy azo antoka mandritra ny androm-piainanao manontolo. Ny tompona toeram-pitrandrahana dia miara-miasa akaiky amin'ny ekipanay manam-pahaizana momba ny dredge alohan'ny fividianana ary tohanan'i Ellicott amin'ny alàlan'ny fametrahana ilay dredge.
Ellicott dia manolotra maodely dredge maromaro izay mifanaraka tsara amin'ny tetikasa habe rehetra amin'ny indostrian'ny fasika sy vatokely ary fitrandrahana. Ny ekipan'ny varotra manam-pahalalana dia hiara-miasa aminao hamantatra ny maodely mifanaraka indrindra amin'ny filan'ny tetikasanao.
Fitrandrahana fasika sy vatokely
Ny fanesorana ny fasika sy vatokely rendrika dia iray amin'ny fampiasana malaza indrindra amin'ny dredge. Ny fasika sy ny vatokely nohadina avy tany an-dranomasina ary avy tany amin'ireo toeram-pitrandrahana tsy misy tanin-tany izay mamatsy ny indostrian'ny fanamboarana manerantany. Na aiza na aiza misy ny tetikasanao, Ellicott® dia manolotra safidy fitaovana enti-miasa dredging isan-karazany mba hisafidianana ao anatin'izany ny dredge cutterhead azo entina, ny zana-tohatra manaparitaka tohatra, na ny lavadavaka lalina fangadiana fanao amboarina.
Ny dredges marika Ellicott® dia namboarina mba hanolorany farany famolavolana asa mavesatra izay afaka mitantana ny fepetra faran'izay henjana indrindra nefa mbola mora entina ihany. Tsy maninona na lehibe na kely ny tetikanao fasika sy vatokely, Ellicott Dredges dia afaka mamolavola sy manangana dredge ara-potoana ary ao anatin'ny tetibola mifanaraka amin'ny fepetra takinao manokana.
Dredges momba ny harena ankibon'ny tany
Ny fampiasana dredges dia fitaovana azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana fasika, vatokely, Frac Sand, Iron Ore na Coal Fine Tailings, ary mineraly hafa. Na manao ahoana ny halehiben'ny tetikasanao amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany dia ny elicott® dia manana dredge izay natao manokana hamaly ny fepetra takiana. Ny fitrandrahana amin'ny dredge no fomba mahomby indrindra ahazoana fitaovana tsy tapaka, na fasika, vatokely na fametrahana sira mafy.
Ny famerenana na fanesorana ireo rambon'ny toeram-pitrandrahana amin'ny alàlan'ny fanovozana dia asa lehibe iray mitazona ny toeram-pitrandrahana sasany hahomby. Ny fampiharana tailings mahazatra ho an'ny dredge marika Ellicott® dia, ankoatry ny hafa, ao amin'ny sehatry ny arintany, vy, volamena ary ny fasika solika. Ny fampiasana dredge amin'ny famerenana ny rambony dia manana tombony azo amin'ny famatsiam-bola.
Ellicott® dia manana tantaram-pananganana dredge marobe azo zohina mba hamenoana ny fepetra takian'ny tetikasan'ny mpanjifa manokana. Nandritra ny taona maro, Ellicott® dia nanome dredge ho an'ny tetik'asa fametahana ho an'ny mpanjifa any Canada, Dominican Republic, Filipina, ary firenena hafa manerantany.
Dredge manokana momba ny harena ankibon'ny tany - “Cooljarloo I”